Dulmarka Tababarka Carewell | Carewell SEIU 503
Tababbarka Carewell SEIU 503 wuxuu siiyaa daryeelka guriga iyo shaqaalaha taakulaynta shaqsiyadeed tababar aad u fiican si ay kuugu qalabeeyaan aaladaha iyo kalsoonida aad ugu baahan tahay si aad u siiso macmiilkaaga saameynta ugu badan — uguna badbaadsan — daryeelka iyo taageerada suurtogalka ah.
Kooxda Tababarka ee Carewell SEIU 503 waxay u heellan yihiin tababarka iyo horumarinta daryeel bixiyeyaasha kuwaas oo ku bixiya taageerada guriga gudihiisa dadka waaweyn iyo dadka qaba naafonimada jireed, aqooneed, ama koritaan. Isku soo wada duuboo, tababaradaani waxay bixiyaan qalabyada iyo xirfadaha aad ugu baahan tahay daryeel bixiye si loo hubiyo nabadgelyadaada shaqada, iyo sidoo kale amniga macmiilkaaga.
Dhammaan daryeelka guriga ee cusub iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed waxaa looga baahan yahay inay qaataan Tababarka Shaqaalaha Cusub.
Daryeelka guriga ee hadda jira iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed waxaa looga baahan doonaa inay qaataan Tababbarka Cusboonaysiinta.
Waxaa jira waxyaabo ka reeban cidda looga baahan yahay inay qaadato tababarka. Ka eeg Tababarka Su'aalaha la Weydiiyo ee FAQ wixii macluumaad dheeraad ah.
Tababbarka Refresher ayaa kaa caawin doona inaad la socotid qaababka ugu fiican, waxayna ku siin doontaa fursad aad kula wadaagto barashadaada shaqo shaqo bixiyeyaasha daryeelka wadaagga ah.
Sii wadida koorsooyinka waxbarashadu waxay kahadlayaan mowduucyo kaladuwan oo aad kala dooran karto si aad ula kulanto baahiyahaaga tababareed kolba haddii aad horumariso xirfadaada waqti ka dib.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Booqo Bogga Waxbarashada ee Carewell si aad maanta isu diiwaangeliso!
Fadlan eeg tilmaantan si looga caawiyo bogga diiwaangelinta haddii luqadda aad doorbideyso aysan aheyn Ingiriis.
Mawduucyada Ku Dabool Tababarka
Fursadaha horumarinta xirfadeed
Tababbarka Qof-Qofka ah
Tababbarka Carewell SEIU 503 wuxuu ku siin doonaa tababar shaqsiyeed guud ahaan Oregon. Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan fadhiyada tababarka ee kuugu dhow Bogga Waxbarashada ee Carewell ka dib markaad isdiiwaangeliso. Kooxda Tababarka ee Carewell SEIU 503 waxay u heellan yihiin sameynta tababarka ay heli karaan dhammaan daryeelka guriga ee Oregon iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyadeed, sidaa darteed bixiyeyaasha badankood uma baahna inay safraan wax ka badan 30 mayl si ay u aadaan goobta tababarka.
Waxaad u baahan doontaa inaad soo qaadato taleefan casri ah, kumbuyuutar, ama laptop aad ku qaadanayso tababarka. Haddii aadan haysan mid ka mid ah aaladahaas, Kooxda Tababarka ee Carewell SEIU 503 waxay lahaan doonaan aalado yar oo la heli karo oo amaah lagu bixin karo marka ugu horreysa ee adeeg la bixiyo. Waxaad u baahan doontaa inaad u isticmaasho qalabka si aad u dhammaystirto qaybaha tababarka sida baaritaanka aqoonta.
Ma leedahay luuqad aad doorbideyso oo aan ka aheyn Ingiriisiga? Waxaan halkaan u nimid inaan caawino. Waxaan kuu qorsheyn karnaa turjumaan si uu kuugu soo biiro tababarka. Nala soo hadal ama email noogu soo dir codsi la xiriira luqaddaada. Waxaan dhawaan bixin doonnaa casharo tababar ah oo lagu qabtay Carabi, Isbaanish, Ruush, Fiyetnaam, Mandarin (cod kor ah), iyo Shiine fudud (qoran).
Daryeel kale oo loogu talagalay macaamilkaaga
Qaar ka mid ah tababarka loo baahan yahay waxay noqon doonaan khadka tooska ah. Si aad u hesho tababarka, waxaad u baahan doontaa inaad booqato Xariirka Waxbarshada ee Carewell . Halkaas, waxaad iska diiwaangelin doontaa koorsooyinka, dhammaystiraysaa qaybaha tababarka, waxaadna la falgaleysaa tababarayaasha iyo bixiyeyaasha kale ee daryeelka adigoo u maraya guddiyada wada hadalka.
Waxaad ubaahan doontaa inaad ka sameysato astaan bogga Portwell Learning Portal si aad u bilowdo. Si tan loo sameeyo waxaad u baahan doontaa cinwaan emayl sax ah. Waxaad ka soo gali kartaa bartaan qalab kasta oo leh marin internet ah sida taleefan casri ah, kumbuyuutar, ama kombiyuutar. Haddii aad isticmaaleysid taleefan casri ah, ku xir WiFi si aad uga fogaato inaad isticmaasho xog badan.
Ku soo dejiso Diiwaangelinta Tababarka ee 'Carewell SEIU 503 & Tilmaamaha Isticmaalaha' tilmaamaha tallaabo-tallaabo ee diiwaangelinta iyo bilowga Bogga Barashada Carewell.
Ka dib markaad ku sameysato astaan bogga Portwell Learning Portal , waxaad dooran kartaa oo iska qori kartaa koorso. Markaad ka diiwaangashan tahay koorso internetka ah, waxaad ku dhammaystiri kartaa cutubyada adigu xawaarahaaga. Khasab kuguma aha inaad dhammaystirto koorsada hal mar, horumarkaaguna wuxuu ku badbaadi doonaa qayb kasta oo aad dhammaystirto.
Ma haysaa su'aalo dheeraad ah? Fiiri Su'aalaha Tababarka ee Carewell SEIU 503.
Hadda dabool: Suuqa Suuqa Caymiska Caafimaadka ayaa mar kale u furan diiwaangelinta!
Halkan guji si aad waxbadan uga barato.